ट्याक्सीले हैरान गरे ? चिन्ता नगर्नुस् | Bishow Nath Kharel
ट्याक्सीले हैरान गरे ? चिन्ता नगर्नुस्
Posted on October 16, 2014 by bishownath
टइक्सीले मिटरमा जान मानेनन् वा मिटर बिगारेर बढी पैसा त असुलेनन् ? यदि यस्तो समस्या भोग्नुभएको छ भने अब तपार्इंले त्यसको तुरुन्तै उजुरी गर्न पाउनुहुने भएको छ। सरकारी कर्मचारीले वितरण गर्ने उजुरी फाराम भरेर तपाईंले मिटरमा जान नमान्ने वा बढी पैसा असुल्ने टइक्सीविरुद्ध कुनै पनि बेला उजुरी गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि तपार्इंले करिब डेढ साता कुर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागले ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागसँगको सहकार्यमा मिटरमा जान नमान्ने वा मिटर बिगार्ने टइक्सीलाई कारबाहीको प्रभावकारी अभियान शुरू गर्ने भएको छ। यसका लागि विभागले अहिले अभियानको प्रक्रिया, उजुरी फाराम निर्माण तथा कारबाहीको मोडल तयार पारिरहेको छ। करिब डेढ साताभित्रै विभागले मिटरमा जान नमान्ने तथा मिटर बिगार्ने टइक्सीविरुद्धको कारबाहीलाई सशक्त बनाउने भएको विभागका निमित्त महानिर्देशक विष्णुबाबु पुडासैनीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।
‘ट्याक्सीले मिटरमा जान नमानेको तथा मिटर बिगारेर बढी भाडा असुलेको गुनासो धेरै आउन थालेको छु, उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसैले अभियान नै चलाएर त्यस्ता ट्याक्सीलाई कारबाही गर्ने तयारी थालेका हौं।ु
विभागले शुरूमा उजुरी फारम बनाएर ट्याक्सी चढ्ने सर्वसाधारणलाई वितरण गर्नेछ। यदि ट्याक्सीले मिटरमा जान अटेर गरे वा मिटर बिगारेको शंका लागे सर्वसाधारणले उक्त फाराम भरेर ट्राफिक प्रहरीलाई बुझाउन सकिनेछ। यसरी बुझाइएको उजुरी फारामको आधारमा फटाई गर्ने ट्याक्सीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै, सर्वसाधारणले ट्राफिक प्रहरी वा विभागमा फोन गरेरसमेत उजुरी गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो।
त्यस्तै, विभागका कर्मचारी तथा संयुक्त अनुगमनको टोलीले यात्रु बनेरसमेत ट्याक्सीमा छड्के अनुगमण गर्ने भएका छन्। सरकारी कर्मचारीले मिटर बिगार्ने, बढी भाडा असुल्ने, डेढी हान्नेलगायत कैफियत गर्ने ट्याक्सीको छड्के अनुगमन गर्ने उहाँले बताउनुभयो।
काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने अधिकांश ट्याक्सी मिटरमा जान मान्दैनन्। यात्रुसँग तोकिएको भन्दा बढी रकम असुल्न उनीहरूले त्यसो गरेका हुन्। विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी ट्याक्सीले मिटरमा जान नमान्ने गरेको भेटिएको हो। मिटरमा जाँदाभन्दा बार्गेनिङ गरेर जाँदा धेरै फाइदा हुने भएकाले ट्याक्सीहरू मिटरमा जान मान्दैनन्। उनीहरू यात्रुहरूलाई हतार तथा अप्ठइरो परेका बेला अझ बढी पैसा असुल्न मिटर चलाउनै मान्दैनन्।
अनुगमनका क्रममा मिटर बिगार्ने, बढी भाडा असुल्ने, डेढी हान्नेलगायत कैफियत पनि भेटिने गरेको छ। अब यस्ता गलत काम गर्ने सबै ट्याक्सीलाई कारबाही गरिने उहाँले बताउनुभयो।
Source :This entry was posted in ताजा समाचार, मुख्य समाचार on October 16, 2014 by Samir.
सेराटन काठमाडौं होटल’ को शिलन्यास
अष्ट्रेलियाको एमआईटी ग्रुप होल्डिङसको लगानीमा काठमाडौंमा निर्माण हुने पाँचतारे होटल ‘सेराटन काठमाडौं होटल’ को शनिबार शिलन्यास भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उक्त होटलको शिलन्यास गर्नुभएको हो।
होटलको शिलन्यास गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले होटलमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी हुनुले नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने बताउनुभयो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नयाँ सन्देश समेत दिएको उहाँको भनाइ थियो।
नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत ग्लेन वाइटले अष्ट्रेलियाबाट नेपालमा वार्षिक २८ हजार पर्यटक आउने गरेको भन्दै अझै बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले होटलमा भएको लगानीले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने समेत बनाउनुभयो।
सोही अवसरमा होटलका प्रवद्र्धकसमेत रहेका एनआरएनका अध्यक्ष शेष घलेले सेराटनको आवागमनसँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलको आवागमन भएको बताउनुभयो।
काठमाडौंको कान्तिपथस्थित केशरमहलसँगै रहेको करिब १४ रोपनी क्षेत्रफलमा होटल निर्माण हुने छ। जम्मा १७ तला रहने छ । जसको दुई तला पार्किङ, बेसमेन्ट र लवीसहित १३ वटा तलामा गेस्ट रुम रहने बताइएको छ।
करिब ८ अर्ब रुपियाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको होटलमा शतप्रतिशत वैदेशिक (अष्ट्रेलियन) लगानी रहने छ। होटलको प्रर्वद्धक अष्ट्रेलियाको एमआईटी ग्रुप होल्डिङस रहेको छ भने व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सिंगापुरको स्टारवुड ग्रुपले गर्ने जानकारी दिइएको छ। गैरआवासीय नेपाली शेष घले र जमुना गुरुङद्वारा प्रर्वद्धित अष्ट्रेलियाको मेलवर्नमा मुख्यालय रहेको ‘एमआईटी ग्रुप होल्डिङ्स’ ले शिक्षा र रियलस्टेट क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। होटलको निर्माण सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा सम्पन्न गरिसक्ने बताइएको छ। सन् २०१८ फेब्रुअरी महिनाबाट होटल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। होटल निर्माणका क्रममा करिब ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन् भने होटल सञ्चालनपछि ४ सय ५० जना दक्ष जनशक्तिले रोजगारी पाउने छन्।
पाँचतारे लक्जरी होटल सेराटन काठमाडौंमा २ सय १८ वटा गेस्ट रुम र सुइट रहने छन्। हेल्थ क्लब, स्पा, वातानुकुलित स्वीमिङ पुल र फिटनेस सेन्टरसहितका सुविधा उपलब्ध हुनेछन्। होटलभित्रै रिटेल सपिङ सुविधा हुने छ भने स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वादका खानाको आनन्द लिन सकिने सञ्चालकले जनाएका छन्।
करिब एक सय मुलुकमा रहेका सेराटन होटल र यसको सञ्जालमार्फत् नेपालको पर्यटन उद्योगको प्रर्वद्धन हुने र नेपालमा स्तरीय पर्यटकको आगमन वृद्धि हुने सञ्चलाकहरूको विश्वास छ।
Source :This entry was posted in अर्थ on October 12, 2014 by Samir.